အင်းစိန် အကျဉ်းဦးစီး အမျိုးသမီးဆောင် ညအချိန်မတော် အမျိုးသား တစ်ဦး ဝင်ရောက်
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး အင်းစိန် အကျဉ်းဦးစီးဌာန ဝန်ထမ်းအိမ်ရာ အတွင်းရှိ အမျိုးသမီး အဆောင်ပေါ်သို့ ညအချိန်မတော် အမျိုးသားတစ်ဦး တက်ရောက်ကာ အမျိုးသမီး တပ်သားတစ်ဦး၏ ခြေထောက်ကို ကိုင်တွယ်ခဲ့သောကြောင့် ဖမ်းဆီးအရေးယူထားကြောင်း အင်းစိန်မြို့နယ်မြို့မရဲစခန်း မှ ရဲအရာရှိတစ်ဦး က ပြောကြားသည်။
ကာကွယ်ရေးပိုင် နေရာသုံးနေရာ ကုမ္ပဏီကြီးသုံးခုအား ဘီအိုတီစနစ်ဖြင့်ငှား
ရန်ကုန်မြို့ရှိ ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနပိုင် မြေနေရာအချို့ကို ပုဂ္ဂလိက ကုမ္ပဏီသုံးခုအား စက်တင်ဘာ
ယုဇနပလာဇာတွင် ဝန်ထမ်းတစ်ဦးအား ပရလောကသား ဝင်ပူးပြီး နေရာ ထိုင်ခင်းတောင်း ဟု ဆရာတော်မိန့်ကြား
ယုဇန ပလာဇာတွင် တရားနာနေသည့် အမျိုးသမီးတစ်ဦးကို ပရလောက သားတစ်ဦးက ဝင်ရောက်ပူးကပ် ပြီး နေရာတောင်းခဲ့ကြောင်း အ ဆိုပါပဋ္ဌာန်းတရားပွဲကို ဦးဆောင် ပြုလုပ်ပေးခဲ့သည့် နတ်မောက် ကျောင်း တိုက် ဆရာတော်ထံမှ သိ ရသည်။
ရန်ကုန်-ကျိုက်ထို အဲကွန်းအမြန်ရထားလက်မှတ် နိုင်ငံခြားသား များနှစ် ပတ်ကြိုဝယ်နိုင်ပြီ
ရန် န်-ကျိုက်ထို အဲကွန်းအထူး အမြန်ရထားခရီးစဉ်ကို နိုင်ငံ ခြားသားများအတွက် နှစ်ပတ်ကြို တင်ဝယ်ယူ နိုင်ပြီဖြစ်ကြောင်း သိရ သည်။
အသိမ်းခံ မြေယာများ မူလပိုင်ရှင်သို့ ပြန်ပေးရန် ကွင်းဆင်းစိစစ်
ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်း ကလော မြို့နယ် ဟဲဟိုးကျေးရွာအုပ်စု အတွင်းရှိ လွန်ခဲ့သောနှစ်များစွာက တပ်မတော်နှင့် ဝန်ကြီးများ သိမ်းဆည်းထားသောမြေယာများ မူလပိုင်ရှင်များသို့ ပြန်လည်ပေးအပ် နိုင်ရန် အတွက် ကလောတပ်နယ်မှူးဗိုလ်မှူးကြီးဇော်ဝင်းဦးဆောင်သော တပ်မတော်အရာရှိများသည် စက်တင်ဘာ ၁၁ရက်က ဟဲဟိုး တစ်ဝိုက်မြေယာများကို ကွင်းဆင်း စိစစ်မှုများ ဆောင်ရွက်ကြောင်း သိရသည်။
လျှပ်စစ်မီးပေါ့ဆစွာ အသုံးပြုသဖြင့် မီးလောင်မှုဖြစ်
၁၆.၉.၂၀၁၃ရက်နေ ၀၆၃၅အချိန် ဘုရင့်နောင်နယ်မြေရဲစခန်းမှ တပ်ဖွဲ့ဝင် များ သည် မရမ်းကုန်းမြို့ နယ်၊
ရဲစခန်းမှ အမှုဆင်ဖမ်းဆီးခြင်းခံရသည်ဆို၍ ဟင်္သာတအကျဉ်းထောင် တွင် ထောင်ချုပ်ကျ တရားခံလေးဦး အစာငတ်ခံဆန္ဒပြမှု ရုပ်သိမ်း
ဧရာ ဝတီတိုင်းဒေသကြီး ဟင်္သာတမြို့ အကျဉ်းထောင်အတွင်း အစာ ငတ်ခံဆန္ဒထုတ်ဖော်သူ လေးဦး ကို တိုင်းအကျဉ်းဦးစီးဌာနရုံးညွှန် ကြားရေးမှူးမှ စက်တင်ဘာ၁၅ ရက် နံနက်၁၁နာရီခန့်တွင် လာ ရောက်တွေ့ ဆုံ ၍ ရှင်းလင်းဖျောင်း ဖျမှုအပြီး မွန်းလွဲ၁နာရီခန့်တွင် အစာငတ်ခံဆန္ဒပြမှု ရပ်ဆိုင်းခဲ့ ကြောင်း သိရသည်။''သူတို့ရဲ့ဝန်ခံကတိပြုတဲ့ ကြေညာလွှာကို ကျွန်တော်တို့ထံ ပေးတယ်။ အဲဒီလိုပြီးတဲ့အခါမှာ အကျဉ်းဦးစီးရဲ့ လုပ်ထုံးလုပ်နည်း နဲ့အညီ လုပ်ငန်းစဉ်တွေအတိုင်း ဆောင် ရွက်ပေးပါတယ်။
ဧရာ ဝတီတိုင်းဒေသကြီး ဟင်္သာတမြို့ အကျဉ်းထောင်အတွင်း အစာ ငတ်ခံဆန္ဒထုတ်ဖော်သူ လေးဦး ကို တိုင်းအကျဉ်းဦးစီးဌာနရုံးညွှန် ကြားရေးမှူးမှ စက်တင်ဘာ၁၅ ရက် နံနက်၁၁နာရီခန့်တွင် လာ ရောက်တွေ့ဆုံ၍ ရှင်းလင်းဖျောင်း ဖျမှုအပြီး မွန်းလွဲ၁နာရီခန့်တွင် အစာငတ်ခံဆန္ဒပြမှု ရပ်ဆိုင်းခဲ့ ကြောင်း သိရသည်။''သူတို့ရဲ့ဝန်ခံကတိပြုတဲ့ ကြေညာလွှာကို ကျွန်တော်တို့ထံ ပေးတယ်။ အဲဒီလိုပြီးတဲ့အခါမှာ အကျဉ်းဦးစီးရဲ့ လုပ်ထုံးလုပ်နည်း နဲ့အညီ လုပ်ငန်းစဉ်တွေအတိုင်း ဆောင်ရွက်ပေးပါတယ်။
သုံးလကြာရပ်နားထားသည့် ကမ်းရိုးတန်း အမြန်ရေယာဉ်များ ပြန်လည်ပြေးဆွဲ
သုံးလ ခန့်အကြာ ရပ်နားထားသည့် ထား ဝယ်-မြိတ်-ကော့သောင်း ကမ်း ရိုးတန်း အမြန်ရေယာဉ်ခရီးစဉ် များကို စက်တင်ဘာ ရရက်မှစပြီး ပြန်လည်ပြေးဆွဲနေပြီဖြစ်ကြောင်း မြိတ် အမြန်ရေယာဉ်အသိုင်းအ ဝိုင်းမှ သိရသည်။
အသက် ၄၅ နှစ်အရွယ်ရှိ အမျိုးသားတစ်ဦး ကြိုးဆွဲချပြီး မိမိကိုယ်ကို သတ်သေ ခဲ့မှုတစ်ခု ဒဂုံတောင်မြို့ နယ်တွင် စက်တင်ဘာ ၁၄ ရက် က ဖြစ်ပွားခဲ့သည်ဟု ရန်ကုန်တိုင်းရဲတပ်ဖွဲ့မှူးရုံးက သတင်းထုတ်ပြန် သည်။
မိတ္ထီလာ ညမထွက်ရအမိန့် ည ၁၁ နာရီမှ နံနက် ၄ နာရီအထိသို့ ပြင်
မိတ္ထီလာမြို့၏ အခြေအနေ တည်ငြိမ်အေးချမ်းလာ၍ ညမထွက်ရ အမိန့်ကို စက်တင် ဘာလ ၁၅ ရက်ညမှ စတင်၍ ည ၁၁ နာရီမှ နံနက် ၄ နာရီသို့ ပြင် ဆင် သတ်မှတ်ပေးလိုက်ကြောင်း မိတ္ထီလာခရိုင် အုပ်ချုပ်ရေးမှူး ဦးတင်မောင်စိုးက The Voice သို့ ပြောကြားသည်။
ရှမ်းပြည်နယ် (အရှေ့ပိုင်း) မိုင်းဖြတ်မြို့နယ်၊ ဆွပ်ပလောင်း ကျေးရွာအနီး ၊ ကျိုင်းတုံ - တာချီလိတ် ကား လမ်း မိုင်တိုင်အမှတ် ၅၅ ကီလိုမီတာနှင့် ၅၆ ကီလိုမီတာ အကြားတွင် စက်တင်ဘာ ၁၄ ရက်နံနက် ၁ဝ နာရီခွဲ အချိန်ခန့်က ကျိုင်းတုံမှ တာချီလိတ်သို့ ယာဉ်အမှတ် ၇က/၄၃၇၈ Light Turck အမျိုးအစား ယာဉ်သည် အရှိန်လွန်ကာလမ်း၏ လက်ယာဘက် ပေ ၅ဝ ခန့် အနက်ရှိ နမ့်လုံချောင်း အတွင်းသို့ ထိုးကျ တိမ်းမှောက် ခဲ့သဖြင့် အမျိုးသား ၂ ဦး၊ အမျိုးသမီး ၇ ဦး၊ စုစုပေါင်း ၉ ဦးသေဆုံပြီး ၁၄ ဦးဒဏ်ရာ ရရှိခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
ဖြစ်စဉ်မှာ မလှိုင်မြို့နယ်ရှိ ကျေးရွာများမှ ခရီးသည် ၂၁ ဦးနှင့် ယာဉ်မောင်း ဦးကြည်ဝင်း ၊ ယာဉ်နောက် လိုက် မိုးသက်တင် စုစုပေါင်း ၂၃ ဦးဖြင့် တာချီလိတ်မြို့သို့ အလုပ်လုပ်ရန် ထွက်ခွာလာခဲ့ရာ အဆိုပါ နေ ရာ တွင် အရှိန်လွန်၍ လမ်းဘေးချောင်း အတွင်းထိုးကျ တိမ်းမှောက် ခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
အခင်း ဖြစ်ပွားရာ နေရာသို့ နယ်မြေခံ တပ်ရင်းမှ တပ်မတော်သားများ ၊ နယ်မြေခံ တပ်မတော် ဆေး ရုံမှ ဆေးကုသရေး အဖွဲ့ဝင်များ ၊ မိုင်းဖြတ် ခရိုင် ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များ ၊ ယာဉ်ထိန်းရဲ တပ်ဖွဲ့ဝင်များ ၊ နယ်မြေ ခံ ပြည်သူ့စစ်များ ၊ လူမှုကူညီရေးအဖွဲ့ဝင်များက သွားရောက်ကယ်ဆယ်၍ ရှေးဦးသူနာပြု လုပ်ငန်း များ ဆောင်ရွက် ပေးပြီး နံနက် ၁၁ နာရီခွဲ အချိန်ခန့်တွင် မိုင်းဖြတ် ပြည်သူ့ဆေးရုံသို့ ပို့ဆောင် ပေးခဲ့ သည်။
အဆိုပါ နေရာတွင် အမျိုးသား ၂ ဦး၊ အမျိုးသမီး ၆ ဦး၊ စုစုပေါင်း ၈ ဦး သေ ဆုံးပြီး မိုင်းဖြတ် ပြည်သူ့ဆေးရုံ တွင် ဆေးကုသမှုများ ဆောင်ရွက် ပေးနေစဉ် အမျိုးသမီးတစ်ဦး ထပ်မံ သေဆုံး ခဲ့သည်။ဆေးရုံ တက်ရောက် ကုသနေသော လူနာများ အနက်မှ အမျိုးသား တစ် ဦးနှင့် အမျိုးသမီး တစ် ဦးတို့မှာ ဦးခေါင်းဒဏ်ရာ (စိုးရိမ်ရ) ရရှိခဲ့ပြီး ကျန်လူနာ များမှာ ထိခိုက် ပွန်းပဲ့ဒဏ်ရာ (မစိုးရိမ်ရ) များ အသီးသီး ရရှိခဲ့သည်။
ဖြစ်စဉ်နှင့် ပတ်သက်၍ ယာဉ်အား မဆင်မခြင် မောင်းနှင်ကာ ခရီး သည်အား သေဆုံး/ ဒဏ်ရာရာ ရှိစေသူ ယာဉ်မောင်း ဦးကြည်ဝင်း ၅၄ နှစ် (ဘ) ဦးဒွေး ၊ ကသစ်ပင်ရပ်ကွက် ၊ ဆည်တိုရွာ ၊ မလှိုင်မြို့နယ် နေသူ အား မိုင်းဖြတ်မြို့မ ရဲစခန်းမှ ယာဉ်(ပ) ၁၁/၂ဝ၁၃ ၊ ပြစ်မှုပုဒ်မ ၃ဝ၄(က) ၊ ၃၃၇ ၊ ၃၃၈ ဖြင့် ရဲအုပ် ကိုကိုအောင် က အမှုဖွင့် စစ်ဆေး ဆောင်ရွက်လျက် ရှိကြောင်း သိရှိရသည်။
မယ်တော် ဆေးခန်း ဆက်လက် လည်ပတ်နိုင်ရေး ခက်ခဲနေ
ထိုင်းနိုင်ငံ မဲဆောက်မြို့ အခြေစိုက် မယ်တော် ဆေးခန်းသည် နေရာပြောင်းရွှေ့ရန်ရှိပြီး ဆေးခန်း ပုံမှန် ဆက်လက်လည်ပတ်နိုင်ရေးအတွက် အခက်အခဲများ ရှိနေကြောင်း သိရသည်။
ရွှေတိဂုံစေတီတော်ကြီး၏ အံဖွယ် ၉ ဆူ
ရွှေတိဂုံစေတီတော်ကြီး၏ အံဖွယ် ၉ ဆူကို တပြိုင်နက်တည်း ဖူးမြော်ခွင့် ရရှိခြင်းဖြင့် လိုရာဆန္ဒများ တစ်လုံးတစ်ဝတည်း ပြည့်စုံပါသည် ...။
ငွေကျပ်သိန်း ထောင်ဂဏန်းရလျှင် ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံးခေါင်းလောင်း စတင်သွန်းလုပ်မည်
မြောင်းမြမြို့နယ် မြစိမ်းရောင်တောင် ရှေးဟောင်း သာသနာ့နယ်မြေ ရှိ မြတိဂုံ စေတီတော် ရင်ပြင်တော် တွင် ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံး ခေါင်းလောင်းကြီး အဖြစ် ထားရှိမည့် ကြေးသွန်း ခေါင်းလောင်းကြီးကို အလှူငွေ ကျပ်သိန်းထောင်ဂဏန်းခန့် စတင်ရရှိလျှင် စတင်သွန်းလုပ် သွားမည် ဖြစ်ကြောင်း ခေါင်းလောင်း ကြီး ဖြစ်မြောက်ရေး ကော်မတီ၏ သတင်းနှင့် ပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံ ဦးနေမျိုးဇော်က ပြောကြားသည်။
စလင်းမြို့ တပ်သိမ်းမြေများအတွက် ကာကွယ် ရေးဝန်ကြီးဌာနနှင့် ဌာနဆိုင်ရာငါးခုသို့ စာတင်
စလင်း မြို့နယ်ရှိ ခလရ(၂၅၃)နှင့် (၂၅၄) တို့မှသိမ်းဆည်းထားသော လယ်ယာမြေများအား လယ်ယာမြေ ဥပဒေနှင့်အညီ ပြန်လည်လုပ် ပိုင်ခွင့်ချထားပေးရန် မြန်မာနိုင်ငံ တောင်သူလယ်သမားဖွံ့ဖြိုးတိုး တက်ရေးပါတီ စလင်းမြို့နယ် ဥက္ကဋ္ဌ ဦးစိုးမြင့်က ကာကွယ်ရေး ဝန်ကြီးဌာနအပါအဝင် ဌာနဆိုင် ရာငါးခုသို့ စာတင်ထားကြောင်း သိရသည်။
အတ္တလနိ်္တတ် သမုဒ္ဒရာကို မိုးပျံ ပူဖောင်းဖြင့် ဖြတ်ကူးရန် ကြိုးပမ်းခဲ့သည့် အမျိုးသား တစ်ဦး အောင်မြင်မှု မရှိဘဲ ရပ်ဆိုင်းခဲ့ရ
အမေရိကန်နိုင်ငံမှ ဂျော်နသန်ထရပ်ပ်အမည်ရှိ အသက် ၃၉ နှစ်အရွယ် အမျိုးသားတစ်ဦးသည်
အခွန်ရှောင်နည်းပြောပြပြီး ဘောက်ဆူးငွေယူသော အခွန်အကြံပေးအရာရှိ အလုပ်ဖြုတ်ခံရ
ဗြိတိသျှအစိုးရ၏ အခွန် အကြံပေး အရာရှိတစ်ဦးအား အလုပ်မှ ထုတ်ပယ်လိုက်သည့် အ ကြောင်းမှာ ၎င်း၏ အခွန်မည်သို့ ရှောင်ရမည်ကို အကြံပေးနေသည့် လျှို့ဝှက်ရုပ်ရှင် ရိုက်ကူးထားခြင်းကို တွေ့ရှိခဲ့
အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံ ဆူမား တြားကျွန်း၌ မီးတောင်တစ်ခု ပေါက်ကွဲခဲ့ရာ ရွာသူရွာသား ထောင်ပေါင်းများစွာ တနင်္ဂနွေ နေ့က ထွက်ပြေးခဲ့ကြရကြောင်း၊ ကျောက်တုံးများ၊ ချော်ရည်ပူများ၊ ပြာများသည် အနီးအနားရွာ များသို့ ကျရောက်ခဲ့ကြောင်း သက်ဆိုင်ရာမှ ပြောကြားခဲ့သည်။မြောက်ဆူမားတြားပြည် နယ်ကာ ရိုခရိုင်ရှိ ဆီနာဘန်မီး တောင်မှာ အရုဏ်မတက်မီအချိန်က ပြင်းထန် စွာပေါက်ကွဲ ခဲ့ ခြင်းဖြစ်သည်။
တီမောလက်စ်တေ နိုင်ငံ ဝန်ကြီးချုပ် နှင့်ဇနီး ရန်ကုန်မြို့မှ ပြန်လည် ထွက်ခွာ
မြန်မာနိုင်ငံ၌ ချစ်ကြည်ရေးခရီး ရောက်ရှိနေသော တီမောလက်စ်တေ ဒီမိုကရက်တစ်သမ္မတနိုင်ငံ ဝန်ကြီး
ဒီမို ကရေစီတွင် မတူ ကွဲပြားသည့် အသံများကို လေးစားရန်၊ ပွင့်လင်းစွာ ဆွေးနွေး၊ ဖျောင်းဖျ တိုက်တွန်း၊ စေ့စပ်ညှိနှိုင်း ဆွေးနွေး ကြရန်နှင့် ဒီမိုကရေစီ ထွန်းကားရေး ပြည်သူ့ အသံမြှင့်တင် ပေးနိုင်ရေး အားပေး တိုက်တွန်း
ပြည်ထောင်စု သမ္မတ မြန်မာ နိုင်ငံတော် နိုင်ငံတော်သမ္မတ အဂ္ဂမဟာသရေစည်သူ အဂ္ဂမဟာ သီရိ သုဓမ္မ ဦးသိန်းစိန် က ယနေ့တွင် ကျရောက်သည့် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ဒီမိုကရေစီနေ့ (၂ဝ၁၃) အထိမ်း အမှတ် အခမ်းအနားသို့ သဝဏ်လွှာ တစ်စောင် ပေးပို့ခဲ့သည်။
ချဲလ်ဆီး တိုက်စစ်တွင် အီတူး အစွမ်းပြနိုင်မည်ဟု မီခေးလ် ထောက်ခံထား
ချဲလ်ဆီးကွင်းလယ်လူ မီခေးလ်ကအီတူးအနေဖြင့် အကောင်းဆုံးပုံစံရရှိလိမ့်မည်ဟု ယုံကြည်ကြောင်းထော က် ခံ အားပေးသွားခဲ့သည်။
နယ်စပ်မှ တရားမဝင် ဝင်ရောက်လာသည့် တရုတ်လူမျိုး တစ်ဦး လက်နက်/ ခဲယမ်းများ နှင့်အတူ ဖမ်းဆီး ရမိ
ရှမ်းပြည်နယ်(အရှေ့ပိုင်း)မိုင်းဆတ် မြို့နယ်၊ မယ်ကြုတ်ရွာသစ်သို့ စက်တင်ဘာ ၁၃ ရက် ညပိုင်းတွင် နယ်
ဧရာဝတီမြစ်ဖျားဆီကမြစ်ကြီးနား မြို့၌ဆန်ဈေးနှုန်း အနည်းငယ်မြင့်တက်လာ
ကချင်ပြည်နယ် မြစ်ကြီးနားမြို့၌ စက်တင်ဘာလပထမပတ်မှစတင်ကာ စားသုံးဆန် ဈေးနှုန်းမှာ တဖြည်းဖြည်း မြင့် တက် လာခဲ့ကြောင်းသိရသည်။
မြန်မာစာပို့စနစ် တိုးတက်အောင် ဂျပန်ကူညီမယ်
မြန်မာ နိုင်ငံမှာ တနိုင်ငံလုံး အတိုင်းအတာ စာပို့စနစ်ကို ပြင်ဆင်မွန်းမံ ချမှတ်ရာမှာ ဂျပန် နိုင်ငံကနေ ကူညီပေး မှာဖြစ်ပြီး အစီအစဉ်ကို ၂၀၁၄ခု ဘဏ္ဍာ နှစ်မှာ စတင်မှာဖြစ်တယ်လို့ သိရပါတယ်။
ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံတွင် အစိုးရတပ်ဖွဲ့နှင့် (MNLF) အဖွဲ့ဝင်များကြား ခြောက်ရက် ကြာ ပဋိပက္ခ ဖြစ်ပွားမှုကြောင့် ၅၆ ဦးထက်မနည်း သေဆုံး
ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံ ဇမ်ဘိုအန်ဂါဆိပ်ကမ်းမြို့တွင် မိုရိုအမျိုးသား လွတ်မြောက်ရေးတပ်ဦး(MNLF)အဖွဲ့ဝင် များနှင့် အစိုးရတပ်ဖွဲ့ဝင်များကြား ဖြစ်ပွားခဲ့သော ခြောက်ရက်ကြာ ပဋိပက္ခများကြောင့် ၅၆ ဦးထက် မနည်း သေဆုံးခဲ့ သည်ဟု သတင်းဌာန တစ်ခုက စက်တင် ဘာ ၁၅ ရက်တွင် ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။
ကမ္ဘာအသက် အကြီးဆုံး စပိန်အမျိုးသားတစ်ဦး အသက် ၁၁၂ နှစ်တွင် ကွယ်လွန်
စပိန်နိုင်ငံတွင် မွေးဖွားခဲ့သော ကမ္ဘာ့ အသက်အကြီးဆုံး အမျိုးသားတစ်ဦးသည် အမေရိကန် ပြည်ထောင်စု နယူးယောက် ပြည်နယ်၌ အသက် ၁၁၂ နှစ် အရွယ်တွင် ကွယ်လွန်ခဲ့ကြောင်း စက်တင်ဘာ ၁၅ ရက်တွင် ၎င်း၏ အသုဘ အခမ်းအနားအား စီစဉ်ပေးသူများက ပြောကြား ခဲ့သည်။
ဂျပန်နိုင်ငံရှိ လည်ပတ်ဆဲ နောက်ဆုံး နျူကလီးယား ဓာတ်ပေါင်းဖို ရပ်ဆိုင်းမည်
ဂျပန်နိုင်ငံရှိ လျှပ်စစ်စွမ်းအင် ထုတ်လုပ်ပေးနေသော လည်ပတ်ဆဲနောက်ဆုံး နျူကလီးယား ဓာတ်ပေါင်းဖို တစ်လုံးကို ပုံမှန်စစ်ဆေးမှုများ ဆောင်ရွက်ရန်အတွက် မကြာမီရပ်ဆိုင်းသွားမည် ဖြစ်ကြောင်း စက်တင်ဘာ ၁၅ ရက် အင်တာနက် သတင်းတစ်ရပ်အရ သိရသည်။
စစ်သွေးကြွများ၏ တိုက်ခိုက်မှုကြောင့် ပါကစ္စတန် စစ်ဘက်ထိပ်တန်း အရာရှိကြီး တစ်ဦး သေဆုံး
ပါကစ္စတန်နှင့် အာဖဂန်နစ္စတန်နိုင်ငံ နယ်စပ်အနီးအနားတွင် စက်တင်ဘာ ၁၅ ရက်က ပါကစ္စတန် စစ်သွေးကြွအကြမ်းဖက်သမားများ၏ ဗုံးထောင်တိုက်ခိုက်မှုကြောင့် ပါကစ္စတန် စစ်ဘက်ထိပ်တန်း အရာရှိ တစ်ဦးအပြင် အခြား အရာရှိကြီးတစ်ဦးနှင့် ရဲဘော်တစ်ဦးတို့ သေဆုံး ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
အပြည်ပြည် ဆိုင်ရာ ဒီမိုကရေစီနေ့ ၂ဝ၁၃ ကျင်းပရခြင်းနှင့် စပ်လျဉ်း၍ သတင်းစာ ရှင်းလင်းပွဲ ကျင်းပ
၂ဝ၁၃ ခုနှစ် စက်တင်ဘာ ၁၅ ရက် တွင် ကျရောက်သော အပြည်ပြည် ဆိုင်ရာ ဒီမိုကရေစီနေ့ ၂ဝ၁၃ အထိမ်းအမှတ် အခမ်းအနား ကျင်းပ ရခြင်းနှင့် စပ်လျဉ်းသည့် သတင်းစာရှင်း လင်းပွဲကို နေပြည်တော်ရှိ
တပ်မတော် ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်၊ 1st Thailand -Myanmar High Level Committee Meeting တက်ရောက်ရန် ထိုင်းနိုင်ငံသို့ ထွက်ခွာ
တပ်မတော် ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင် ဦးဆောင်သော မြန်မာ့ တပ်မတော် ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့သည် ထိုင်းနိုင်ငံတွင် ကျင်းပပြုလုပ်မည့် 1st Thailand -Myanmar High Level Committee Meeting တက်ရောက်ရန်အတွက် ယနေ့မွန်းတည့် ၁၂ နာရီ တွင် နေပြည်တော် လေဆိပ် မှ မြန်မာ့တပ်မတော် အထူးလေ ယာဉ် ဖြင့် ထွက်ခွာသည်။
စင်ကာပူနိုင်ငံအခြေစိုက် UPP Power ကုမ္ပဏီသည် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး အင်းစိန်မြို့နယ်ရှိ ရွာမ သဘာ
မန္တလေးတိုင်း ရေဘေးဒုက္ခသည်များ။ (ဓာတ်ပုံ/စိတ္တသုခ ပရဟိတ လူငယ်အဖွဲ့)
ဧရာဝတီနဲ့ ဒုဋ္ဌဝတီ မြစ်ရေလျှံမှုကြောင့် မန္တလေးတိုင်းအတွင်းမှာ ရေကြီးမှုတွေ ဖြစ်ပေါ်နေပြီး အိမ်ခြေ ထောင်နဲ့ချီ ရေမြုပ်ကုန်တဲ့အတွက် အတော်လေး ဒုက္ခရောက်နေကြရတယ်လို့ ဒေသခံတွေက ဗွီအိုအေကို ပြောပြပါတယ်။
"ဝ" နယ်မြေ သန်းခေါင်စာရင်း ကောက်ရေး ဝန်ကြီးဦးခင်ရီ ရှင်းပြ .
လာမယ့်၂၀၁၄ ခုနစ် ပြည်လုံးကျွတ် သန်းခေါင်စာရင်း ကောက်ယူရာမှာ ပါဝင်တဲ့ ဒေသတခုဖြစ်တဲ့ "၀" ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရ ဒေသအတွက် ကောက်ယူမယ့်အစီစဉ်မှာ စစ်ရေးအမြင်တွေ ထည့်သွင်း မစဉ်းစားဖို့ လူဝင်မှု ကြီးကြပ်ရေးနဲ့ ပြည်သူ့အင်အား ဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးခင်ရီ က ဒီကနေ့ တိုက်တွန်း လိုက်ပါတယ်။
စင်ကာပူနိုင်ငံအခြေစိုက် UPP Power ကုမ္ပဏီသည် ရန်ကုန် တိုင်းဒေသကြီး အင်းစိန်မြို့နယ်ရှိ ရွာမ သဘာဝဓာတ်ငွေ့သုံး ဓာတ်အားပေးစက်ရုံ ဝင်းအတွင်းတွင် အကောင်အထည် ဖော်နေသော သဘာဝ ဓာတ်ငွေ့သုံး လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးစက်ရုံ စီမံကိန်းမှ လျှပ်စစ်ဓာတ်အား ထုတ်လုပ် ရောင်းချခွင့်ကို စက်တင်ဘာလ ၁၁ ရက်နေ့က ရရှိကြောင်း မြန်မာနိုင်ငံ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ကော်မရှင်ထံမှ သိရသည်။
ဧက ၅၀၀၀ ကျော် ပုစွန်မွေးမြူရေးဇုန် အပါအ၀င် အအေးခန်းစက်ရုံနှင့် ပုစွန်သားဖောက် စခန်းများကို ပုဂ္ဂလိက လုပ်ငန်းရှင်များနှင့် ပူးတွဲလုပ်ကိုင်မည်
ဧက ၅၀၀၀ ကျော်ရှိသည့် ပုစွန်မွေးမြူရေးဇုန် အပါအ၀င် အအေးခန်းစက်ရုံနှင့် ပုစွန်သားဖောက် စခန်း များကို ပြည်တွင်းပြည်ပ လုပ်ငန်းရှင်များနှင့် အကျိုးတူ ပူးပေါင်း လုပ်ကိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်း မွေးမြူရေး ၊ ရေလုပ်ငန်းနှင့် ကျေးလက်ဒေသ ဖွံ့ဖြိုးရေး ၀န်ကြီးဌာန၊ ငါးလုပ်ငန်း ဦးစီးဌာနမှ သတင်းရရှိသည်။
လက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခတွေရှိနေပြီး ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေး မရသေးသမျှ ဒီမိုကရေစီမရနိုင်တဲ့အတွက် အခုချိန်ဟာ ဒီမိုကရေစီလမ်းစဉ်ကို ပြတ်ပြတ် သားသားရွေးချယ်ရမဲ့ အချိန်ဖြစ်တယ်လို့ အမျိုးသား လွှတ်တော်နာယက ဦးခင်အောင်မြင့်က ဒီကနေ့မှာ ပြောကြားလိုက်ပါတယ်.
ယင်းချောင်းရေကြီးမှုကြောင့် မကွေး-နေပြည်တော် ကားလမ်းပေါ်ရှိ တံတားချဉ်းကပ်လမ်း ရေတိုက်စားခံခဲ့ရ
မြို့သစ်မြို့နယ် ယင်းချောင်းတံတား ချဉ်းကပ်လမ်း ပြိုကျမှုအား စက်တင်ဘာ ၁၅ ရက်က တွေ့ရစဉ်
စက်တင်ဘာ ၁၁ ရက်မှ ၁၄ ရက်ညထိ မိုးသည်းထန်စွာ ရွာသွန်း ခဲ့သောကြောင့် မကွေးတိုင်း မြို့သစ်မြို့ နယ်အတွင်း ယင်းချောင်းရေကြီး ကာ လယ်ဧက ၅၀ ကျော်နှင့် မကွေး-နေပြည်တော် ကားလမ်းပေါ် ရှိ တံတားချဉ်းကပ်လမ်းတစ်ခု စက်တင်ဘာ ၁၅ ရက် နံနက် ၄ နာရီကျော် ခန့်က ရေတိုက်စားခံ ရမှု ဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်း ဒေသခံများထံမှ သိရသည်။
ဟုမ္မလင်းမြို့နယ် နားမော်ကျေးရွာတွင် မိုးကြိုးပစ်မှုကြောင့် ကျောင်းသူ သုံးဦး သေဆုံး ပြီး ၂၀ ကျော် ဆေးရုံတက်ခဲ့ရ
ဟုမ္မလင်းမြို့နယ် နားမော်ကျေးရွာ စာသင်ကျောင်းမကြီးအား စက်တင်ဘာ ၁၄ ရက် ညနေ ၃ နာရီ ၁၅ မိနစ် ၀န်းကျင်ခန့်က မိုးကြိုးပစ်မှုကြောင့် သုံးဦးသေဆုံးခဲ့ပြီး ကျောင်းသူ၊ ကျောင်းသား ၂၀ ဦးခန့် နောင် ပိုအောင်ကျေး ရွာ ဆေးရုံ၌ ဆေးကုသခဲ့ရသည်ဟု သိရသည်။
တိုင်းရင်းသား ၁၃၅ မျိုးတွင် တရုတ်နှင့် ဘင်္ဂါလီ မပါဝင်ကြောင်းနှင့် သန်းခေါင် စာရင်း ကောက်ယူရာ၌ ၎င်းတို့ကို အခြားတွင် ထည့်သွင်းကောက် ယူ သွားမည်
ပြည်လုံးကျွတ် သန်းခေါင်စာရင်းဆိုင်ရာ ရှင်းလင်းပွဲတွင် ပြည်ထောင်စု ၀န်ကြီး ဦးခင်ရီ ပြောကြားနေစဉ်
တိုင်းရင်းသား ၁၃၅ မျိုးတွင် တရုတ်၊ ဘင်္ဂါလီနှင့် ပါကစ္စတန်မပါဝင်ကြောင်းနှင့် ၂၀၁၄ ခုနှစ် ပြည်လုံးကျွတ် သန်းခေါင်စာရင်း ကောက်ယူ ရာ၌ ၎င်းတို့ကို အခြားတွင် ထည့်သွင်းကောက်ယူ သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့အင်အား ၀န်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးခင်ရီက ဆိုသည်။
ခေါင်းဆောင်များအနေဖြင့် မျှော်လင့်ချက် ကြီးမားနေသည့် ပြည်သူများ၏ စိုးရိမ်သောကများကို ပြတ်ပြတ်သားသား ဖြေရှင်းရန် လိုအပ်ကြောင်း ဦးခင်အောင်မြင့် ပြောကြား
ခေါင်းဆောင်တာဝန်ယူထားသူများအနေဖြင့် မျှော်လင့်ချက် ကြီးမားနေသည့် ပြည်သူများ၏ စိုးရိမ်သော က ဖြစ်မှုများကို ပြတ်ပြတ်သား သား ဖြေ ရှင်းပေးရန် လိုအပ်ကြောင်း စက်တင်ဘာ ၁၅ ရက်က ကျင်း ပသည့် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ဒီမိုကရေစီနေ့ အခမ်းအနားတွင် အမျိုးသားလွှတ်တော် ဥက္ကဋ္ဌ ဦးခင်အောင်မြင့် က အဖွင့်မိန့်ခွန်းတွင် ပြောကြားသည်။
နေအိမ်အကျယ်ချုပ် ကျစဉ်ကတည်းက နှစ်စဉ်ဖိတ်ကြား ခံခဲ့ရသည့် Forum 2000 ဆွေးနွေးပွဲသို့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ပထမဆုံးအကြိမ် အဖြစ် တက်ရောက်
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်ဥက္ကဋ္ဌ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ၎င်းအားနေအိမ်အကျယ်ချုပ် ချထားစဉ် ကတည်းက နှစ်စဉ်ဖိတ်ကြား ခဲ့သော်လည်း တက်ရောက်နိုင်ခဲ့ခြင်း မရှိခဲ့သော Forum 2000 ဆွေးနွေးပွဲအား ယခုနှစ် (၁၇) ကြိမ်မြောက်တွင် ပထမဆုံး အကြိမ်အဖြစ် တက်ရောက်ခဲ့သည်။
၂၀၁၃ ခုနှစ် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ဒီမိုကရေစီနေ့ အခမ်းအနား ကျင်းပ
၂၀၁၃ ခုနှစ် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ဒီမိုကရေစီနေ့ အခမ်းအနားကို တွေ့ရစဉ်
၂၀၁၃ ခုနှစ် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ဒီမိုကရေစီနေ့ အခမ်းအနားအား စက်တင်ဘာ ၁၅ ရက်တွင် လွှတ်တော် ၀န်း အတွင်းရှိ သဘင်ဆောင်တွင် ကျင်းပခဲ့သည်။
ကာကွယ်ရေးပိုင် နေရာသုံးနေရာ ကုမ္ပဏီကြီးသုံးခုအား ဘီ...
အသိမ်းခံ မြေယာများ မူလပိုင်ရှင်သို့ ပြန်ပေးရန် ကွင...
ရဲစခန်းမှ အမှုဆင်ဖမ်းဆီးခြင်းခံရသည်ဆို၍ ဟင်္သာတအကျဉ်း...
သုံးလကြာရပ်နားထားသည့် ကမ်းရိုးတန်း အမြန်ရေယာဉ်များ...
မိတ္ထီလာ ညမထွက်ရအမိန့် ည ၁၁ နာရီမှ နံနက် ၄ နာရီအထိသ...
ငွေကျပ်သိန်း ထောင်ဂဏန်းရလျှင် ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံးခေါင်း...
စလင်းမြို့ တပ်သိမ်းမြေများအတွက် ကာကွယ် ရေးဝန်ကြီးဌ...
အတ္တလနိ်္တတ် သမုဒ္ဒရာကို မိုးပျံ ပူဖောင်းဖြင့် ဖြတ်ကူ...
အခွန်ရှောင်နည်းပြောပြပြီး ဘောက်ဆူးငွေယူသော အခွန်အြ...
တီမောလက်စ်တေ နိုင်ငံ ဝန်ကြီးချုပ် နှင့်ဇနီး ရန်ကုန...
ဒီမို ကရေစီတွင် မတူ ကွဲပြားသည့် အသံများကို လေးစားရ...
White Card ကိုင်ဆောင်သူများ မဲပေးခွင့်ရရှိရန် ရွေး...
ချဲလ်ဆီး တိုက်စစ်တွင် အီတူး အစွမ်းပြနိုင်မည်ဟု မီေ...
နယ်စပ်မှ တရားမဝင် ဝင်ရောက်လာသည့် တရုတ်လူမျိုး တစ်ဥ...
ဧရာဝတီမြစ်ဖျားဆီကမြစ်ကြီးနား မြို့၌ဆန်ဈေးနှုန်း အန...
ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံတွင် အစိုးရတပ်ဖွဲ့နှင့် (MNLF) အဖ...
ကမ္ဘာအသက် အကြီးဆုံး စပိန်အမျိုးသားတစ်ဦး အသက် ၁၁၂ နှ...
ဂျပန်နိုင်ငံရှိ လည်ပတ်ဆဲ နောက်ဆုံး နျူကလီးယား ဓာတ်...
စစ်သွေးကြွများ၏ တိုက်ခိုက်မှုကြောင့် ပါကစ္စတန် စစ်ဘက...
အပြည်ပြည် ဆိုင်ရာ ဒီမိုကရေစီနေ့ ၂ဝ၁၃ ကျင်းပရခြင်းန...
"ဝ" နယ်မြေ သန်းခေါင်စာရင်း ကောက်ရေး ဝန်ကြီးဦးခင်ရ...
တောင်ကိုရီးယား အမျိုးသမီးတစ်ဦး ရေဘဝဲအရှင်စားသုံြး...
ဧက ၅၀၀၀ ကျော် ပုစွန်မွေးမြူရေးဇုန် အပါအ၀င် အအေးခန်...
ယင်းချောင်းရေကြီးမှုကြောင့် မကွေး-နေပြည်တော် ကားလမ်...
ဟုမ္မလင်းမြို့နယ် နားမော်ကျေးရွာတွင် မိုးကြိုးပစ်မ...
ခေါင်းဆောင်များအနေဖြင့် မျှော်လင့်ချက် ကြီးမားနေသည...
နေအိမ်အကျယ်ချုပ် ကျစဉ်ကတည်းက နှစ်စဉ်ဖိတ်ကြား ခံခဲ့...
၂၀၁၃ ခုနှစ် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ဒီမိုကရေစီနေ့ အခမ်းအန...